Ecuador Omenala | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Ecuador, Nduzi
Latin America Ọ bụ ite agbaze nke agbụrụ na ọtụtụ puku afọ nke mmepeanya na ọdịbendị ahapụwo ihe nketa dị mkpa. Ikekwe, maka onye na-abụghị onye America, enweghị esemokwu ma ọ bụ ọdịiche dị iche iche mana enwere taa ị ga-ekwu maka Omenala nke Ecuador.
Ecuador, obere obodo ị nwere ike ịmara, n'etiti ihe ndị ọzọ, n'ihi na ebe a bụ equator, usoro nkewa nke ụwa n'akụkụ abụọ, yana n'ihi na Julian Assange, nwoke ahụ nwere nnukwu Wikileaks, bụ onye gbara ọsọ ndụ na London nnọchi anya mba ọzọ ruo ọtụtụ afọ.
2 Omenala Ecuador
Ọ bụ ọdịda anyanwụ nke South America ma nwee ụsọ mmiri n'ụsọ Oké Osimiri Pasifik. Place na-etinye ya n’agbata Colombia na Peru na isi obodo ya bụ obodo Quito. O nwere ugwu, Andes, o nwere oke osimiri na akụkụ nke oke ọhịa Amazon.
Ndị bi na ya bụ mestizo na nnukwu ọnụ ọgụgụ, ihe karịrị ọkara, ngwakọta nke ndị Spain na ụmụ ụmụ amaala, ọ bụ ezie na enwerekwa obere ndị ojii sitere na ndị ohu.
Ecuador ọ bụ Republic y a na-asụ ọtụtụ asụsụ ebe a na mgbakwunye na asụsụ ndị Spen kachasị. Dị ka ihe atụ, e mere atụmatụ na ihe karịrị nde mmadụ abụọ na-asụ asụsụ ndị America, gụnyere Quechua na ụfọdụ ụdị ndị dị na ya, Kofan, Tetete ma ọ bụ Waorani, nanị ịkpọ aha ole na ole. Na ihe a niile ị gaghị eche na Ecuador bụ mba nwere agbụrụ, nwere ọtụtụ asụsụ na ọtụtụ ndị mmadụ, eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ ọdịnala ọdịnala.
Yabụ, Ecuador bụ mba dị iche iche. Mpaghara mpaghara ọ bụla nwere njirimara ya na nke a gosipụtara na asụsụ kamakwa na uwe, gastronomy, omenala. E nwere ngụkọta mpaghara anọ akara akara nke ọma: n'ụsọ oké osimiri, na Andes, Amazon na Galapagos akipelago.
Nke mbu, abum nwanyi ka ihe banyere machismo masiri m. Ecuador bụ obodo macho, nke nketa siri ike nke Katọlik na nkewa di iche n’etiti ihe nwoke na eme. Ọ bụ ezie na ihe niile na-agbanwe ma n'oge a ifufe ndị ọzọ na-efegharị n'ụwa niile, anyị amatalarị ụgwọ ọ na-efu maka nke a ịgbanwe na ebe a abụghị otu.
Dị ka latinos niile Ndị Ecuador dị ka kọntaktị anụ ahụ, ya mere ọ bụrụ na enwere mmekorita oge ahụ ma ọ bụ okwukwe aka Morningtụtụ ọma nụ na ndị ọzọ, ịmakụ ma ọ bụ ite aka n'ubu. Mụ nwanyị ahụ, n'aka nke ha, susuru onwe ha ọnụ na agba. Ọ bụrụ na enweghị mmata ọ bụzi ihe ziri ezi itinye sir, nwada ma obu miss tupu aha dị ka naanị ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ na-emeso aha mbụ.
Ọ bụrụ na a kpọọ gị n'ụlọ nke onye Ecuador, ihe ị ga-eme bụ iweta onyinye nke nwere ike ịbụ ihe eji megharịa ọnụ, mmanya ma ọ bụ okooko osisi. N'ebe a, a ga-emepe onyinye n'ihu gị, ọ bụghị dịka na mba ndị ọzọ ebe a na-ewere nke ahụ ka mkparị. Ọzọkwa oge. Ee, ị gụrụ ikike ahụ. Latinos dị jụụ karịa Orientals, dịka ọmụmaatụ, yabụ ọ bụrụ na ha kpọọ gị n'elekere itoolu nke abalị, ha ga-atụ anya n'elekere 9:9 nke abalị.
A tost tupu ịmalite ị drinkụ ihe ọ isụ isụ bụ ihe a na-emebu, na mkpu nke Ahụ ike! onye ọ bụla na-a takesụ mmanya ma takesụọ mmiri ọ ofụ inụ na ajụjụ. Nri ndị ahụ na-atọ ụtọ nke ukwuu ma enwere mkparịta ụka. N'ikpeazụ, ọ na-egosi na ị na-asọpụrụ ya tupu ị rie nri ma ọ bụ mgbe anyị risịrị. Anaghị m ekwu na ị ga-asa efere mana ikekwe ị ga-eweli iko ole na ole. Ọ bụrụ na ọ bụghị nri ndị enyi ọ bụ ihe iwu, ọrụ, ụkpụrụ omume Ecuador bụ stricterA na-eji akara mmụta agụmakwụkwọ, a gbanwere kaadị azụmahịa, ụmụ nwoke na-ejide ụmụ nwanyị aka.
Dị ka Latinos n'ozuzu onye Ecuador nwere omume enyi ma na-ekpo ọkụ na mmekọrịta gị. Ha ga-abịakwute gị mgbe ị na-ekwu okwu, ha ga-emetụ gị aka, ha agaghị ewe iwe ma ị mee otu ihe ahụ. Ha nwere a nnukwu asụsụ na-enweghị isi ha anaghị anapụ onwe ha ihe niile. Ọ bụrụ na edobe gị iche, ọ nwere ike iju gị anya mana emeghị ya n'ihi asịrị kama ọ bụ n'ihi na onye ahụ chọrọ ka ọdịdị gị dịkwuo mma.
Kedu ka esi eme ejiji Ecuador? Ọfọn, nke mbụ, e nwere ejiji mba ụwa na Ecuador anọghị na mbara ụwa ọzọ. Nke ahụ kwuru, ọ bụkwa eziokwu na mpaghara ọ bụla nwere ụdị uwe nakwa na ụdị ndị ahụ na-egosi ọdịbendị dịgasị iche iche nke mba ahụ. Ọmụmaatụ, n'isi obodo Quito, ụmụ nwoke na-eyikarị poncho bulu, okpu na nịịka ọkara. N'úkwù bụ shimba, ogologo braid nke nwere tupu Inca ma bụrụkwa omenala.
N'aka nke ọzọ, ụmụ nwanyị na-eyi uwe elu nwanyị na-acha ọcha (mgbe ụfọdụ isi awọ ma ọ bụ khaki), na ogologo aka na mgbe ụfọdụ a neckline. Uwe ahụ na-acha anụnụ anụnụ, na-enweghị akwa mkpuchi, ma eleghị anya, ọ nwere ụfọdụ ihe ndozi na ọnụ ya. A na-agbakwunye coral uhie na mgbaaka ọla edo na shawls, dị ka ngwa dị mkpa. Uwe a na-acha nwere ọtụtụ agba nke ha na-eyi n’elu uwe elu nwanyị bụkwa ihe nnọchianya, dịka okpu na olu olu. Ugbu a, na mpaghara dị n'ụsọ oké osimiri, ụmụ nwoke na-eyi guayaberas na ụmụ nwanyị uwe mwụda.
Dị ka ị hụrụ enweghị otu ụdị ejiji Ọ bụ ezie na nke a na-ebu na Quito ma kọwaa n'elu bụ nke kacha nso na otu. N'aka nke ọzọ, n'ugwu, a na-eyi uwe mwụda, mana a na-atọ ụtọ, na agba na-acha odo odo yana ejiri akwa na mkpuchi ajị anụ. N'aka nke ya, na akwa ntutu isi nke Amazon ka na-adịgide ma n'akụkụ ndị ọzọ nke mba ahụ, ọ dị mwute, ejiji mba ụwa echefuola ụdị ejiji ndị ghọrọ naanị ebe ndị njem nleta.
N'ikpeazụ, okwu abụọ iji gosi: ememme na nri. Mmasị na ìgwè mbụ bụ fOge ezumike nke Inti Raymi, Yamor na Mama Negra. Nke mbụ bụ ememme a raara nye anyanwụ nke na-agba ụtụtụ oyi na June. A na-eme Yamor na mbido September na Otavalo na Mama Negra bụ emume ndị ọgọ mmụọ nke na-eme na Nọvemba.
Banyere kichin nri kacha mkpa n’ụbọchị bụ nri ehihie y mpaghara ọ bụla nwere gastronomy ya. Azu, azu azu na nkpuru osisi nke okpomoku dika unere na-etinye uche na mpaghara ala gbara osimiri okirikiri na osikapa na anu n’ugwu. Nwere ike ịnwale ceviche, ewu kpọrọ nkụ (stew), ofe ozo akpo Fanesca na agwa, lentil na ọka, na azụ ofe na eyịm ala gbara osimiri okirikiri ma ọ bụ Petacones, unere eghe.
Travelga Ecuador n'enweghị ihe ijuanya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Ecuador » Omenala Ecuador